Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Dagaal Culus oo ka Dhacay Horakhaliifo
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Dagaal Culus oo ka Dhacay Horakhaliifo
Posted by ONA Admin	/ August 30, 2014
Wararka aan ka helayno Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo ciidanka cadawga lagu naafeeyay sidoo kale Xarunta dhexe ee JWXO waxay nasoo gaadhsiisiiy faahfaahinta qayb kamid ah weeraradii qorshaysnaa ee dhacay 23kii bishan kuwaas oo aan idinka balan qaadnay in aan faahfaahintooda keenidoono. Isugaynta khasaaraha cadawga kasoo gaadhay dagaalada aan helnay faahfaahintooda waa 49 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac intaa kor u dhaafaya. Waxaa kaloo jira dagaal dagaal culus oo ka dhacay Horakhaliifo oon gadaal ka ogaan doono khasaaraha cadawga kasoo gaadhay.
Dagaaladan ugu danbeeyay ee nasoo gaadhay ayaa u dhacey sidan;
5/8/14 Dhoofa oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan weerar sifiican loo qorsheeyay oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxay qudha kaga jareen 15 askari 23 kalana way kaga dhaawaceen.
8/8/14 Deegaanka lagu magacaabo Axmadbarow oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari tiro aan laxaqiijinin na waa lagaga dhaawacay.
21/8/14 Tuuryolalis oo dagmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
26/8/14 Dhabajiriso oo Birqod katirsan dagaal mir ah oo ay cwxo kuqaadeen ciidamada cadawga oo halkaas kusugnaa waxay kudileen 1 askari 1 kalana way kudhaawaceen.
26/8/14 Horakhaliifo oo Qabribayax katirsan dagaal gacmaha laysulatagay oo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga loogu gaystay khasaare aad ubadan oo aan wali lafaahfaahinin waxaana lageeyay magaalada Qabribayax bakhti iyo dhaawac badan oo ciidanka cadawga soogaadhay.
27/8/14 Higlalay oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 7 askari tiro aan lacayimina waa lagaga dhaawacay.
28/8/14 Halooyo oo Gobolka Shabeelle katirsan dagaal cwxo iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhanka kale waxaa Faahfaahin laga helay qayb kamid ah weeraradii qorshaysnaa ee ay CWXO 23/8/14 kuqaadeen fadhiisimo badan oo ay ciidanka cadawgu Ogadenia ku leeyihiin waxaana faahfaahintooda helay dagaalada kadhacay Gobolka Nogob oo kala ahaa;
– Bashuuro oo Fiiq katirsan waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
– Qoofalay oo Fiiq katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 7 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
– Dheemaha oo Fiiq katirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
– Dhagaxdhaal oo sidoo kale Fiiq katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 23/8/14 Baka oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kamid ahaa weerarkii qorshaysaa ee ay cwxo fuliyeen waxay cadawga kaga dileen 4 askari 6 kalana way kaga dhaawaceen.